Izizathu zokuthi kungani i-CEO yakho Kufanele Ibe Ku-Social Media | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 16, 2014 NgoLwesine, ngo-Okthoba 16, 2014 Douglas Karr
Ubuwazi lokho kuphela 1 kuma-CEO angu-5 useze wavula ne-akhawunti yezokuxhumana? Ngokubona kwami, lokho kudabukisa kakhulu ngenxa yokuthi amandla ayisisekelo sanoma yisiphi isikhulu kulezi zinsuku kufanele kube yikhono labo lokuxhumana namathemba, amakhasimende, abasebenzi kanye nabatshalizimali. Imithombo yezokuxhumana inikeza izindlela ezisebenza ngendlela emangalisayo yokwenza ukuxhumana ngombono nobuholi ufuna amakhasimende abone, abasebenzi bakho babathande, kanye nabatshalizimali bakho babe nokholo!
Lokhu infographic kusuka Online MBA uhamba kuzo zonke izibalo ezihlotshaniswa nempumelelo emangalisayo abaphathi bezenhlalakahle abanayo! Phakathi kwezinkampani ezingama-50 ezihamba phambili emhlabeni, izingxenye ezimbili kwezintathu zama-CEO zine-akhawunti yezokuxhumana. Akumangalisi ukuthi cishe isigamu sezinkampani udumo ludalwa yindlela abantu ababheka ngayo i-CEO! Futhi uhhafu wabo bonke abathengi ukholelwa ukuthi ama-CEO angahlanganyeli ezinkundleni zokuxhumana ngeke axhumane namakhasimende abo.
Abathengi abayi-8 kwabali-10 bathe bangaba sethubeni lokuthembela enkampanini i-CEO nethimba labo elisebenza ezinkundleni zokuxhumana futhi bazokwazi ukuthenga enkampanini abaholi bayo ababambe iqhaza ezinkundleni zokuxhumana.
Okokugcina kodwa hhayi ukuqasha, abasebenzi bathokozela i-CEO esebenzisa izinkundla zokuxhumana. Abasebenzi abangama-78% bathe bazosebenzela i-CEO ebandakanyeka ezinkundleni zokuxhumana kanti u-81% ubathathe njengabaholi abangcono kakhulu. Ama-93% akholelwa ukuthi abaphathi bezenhlalakahle bakulungele kangcono ukubhekana nesimo esibucayi.
Tags: Ceoesiphezulusocial mediaSocial Media Marketing
Ingabe Kufanele Wakhe Noma Uthenge Ipulatifomu Yakho Yokumaketha elandelayo?
Alden Dale (@ldlddale)
I-Oct 16, i-2014 ku-6: i-50 PM
Leso simemezelo sesingeniso… “i-CEO eyodwa kuphela kwezi-1” ayinakulunga. Ukwamukelwa kwemithombo yezokuxhumana kuwo wonke amanani abantu kuphakeme kakhulu. Mhlawumbe “ngu-5 kuphela ku-1 CEO obelana esidlangalaleni nge-akhawunti yakhe ye-SM” kodwa angikholwa ukuthi ama-CEO amane kwama-5 abambekile ngo-4… noma mhlawumbe bengivele ngisezinkampanini ezinama-CEO axhunywe ngamadijithi?
I-Oct 16, i-2014 ku-7: i-55 PM
Angikholwa ukuthi ama-CEO abambekile ngo-1994, ngicabanga nje ukuthi iningi lawo aliboni ukubaluleka kokuchitha isikhathi ezinkundleni zokuxhumana. Sizokwabelana ngeminye imiphumela evela ku-DOMO ethola ukuthi incane kakhulu njengoba ungena ezinkampanini zeFortune 500 - ama-8.3% nje.
Okthoba 17, 2014 ngo-11: 58 AM
Kuyahlanya nje lokho. Angikaze ngikuqagele lokho; impela into okufanele uyikhumbule lapho wakhela abathengi nomuntu. Siyabonga ngolwazi oluhle!